Fiaraha-miasa BNI-Cnaps : tsy ho vesatra ho an’ny fiarahamonina ny zokiolona - ewa.mg
Fiaraha-miasa BNI-Cnaps : tsy ho vesatra ho an’ny fiarahamonina ny zokiolona
News - Fiaraha-miasa BNI-Cnaps : tsy ho vesatra ho an’ny fiarahamonina ny zokiolona
Miara-miasa izao ny Cnaps sy ny BNI
Madagascar, ho fanavaozana sy ho fanamorana ny fisotroan-dronono ho
an’ireo zokiolona. Tato anatin’ny roa taona izao, miezaka ny BNI
manakaiky ny mponina sy mampihatra ny politika fi­sarihana ireo
zokiolona misotro ronono avy amin’ny se­hatra tsy miankina sy ny
fanjakana, ahafahan’izy ireo manohy mivantana na tsy mivantana ny
fihariana amin’ny fampihodinana ny toekarena. Afaka mandraharaha ny
zokiolona amin’izay sehatra manavanana azy, tsy ho vesatra ho an’ny
Araka izany, misokatra ho an’ireo manana fifandraisana amin’ny
Cnaps ny tambajotra ao amin’ny banky BNI Ma­da­gascar, manafaingana
ny fikirakiran’izy ireo ny volany. Resen-dahatra ireo zokiolona avy
amin’ny sehatra tsy miankina handray ny fisotroan-dronono any
amin’ity banky ity, misy fandraisana manokana ho azy ireo, miaraka
amin’izany ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana.
Ahitana tolotra maro izao fiaraha-miasan’ny roa tonta izao, ho
an’ireo zokiolona, manamora ny fiainan’izy ireo, toy ny fahazoana
mampiasa Gab (Guichets automatiques de la banque) miisa 122,
amin’ny fotoana rehetra. Misy, ohatra, ny « Crédit Mitsinjo »
ahazoan’ireo misoratra ao amin’ny Cnaps mindram-bola hatramin’ny
valo tapitrisa ariary, haverina ao anatin’ny enim-bolana
hatramin’ny roa taona. Hamoraina ny fepetra rehetra ho an’izany
findramam-bola izany, tsy takina antoka manokana. Mety ha­voaka ao
anatin’ny 24 ora ny vola hindramina, raha mahafeno ny fepetra
Manome fanazavana ny tombontsoa rehetra ny BNI Madagascar amin’ny
alalan’ny tambajotrany, manampy mi­van­tana ireo misotro ronono ao
amin’ny Cnaps maniry ha­nokatra petra-bola. Safidin’ny maro anisa
amin’ireo zokiolona ireo rahateo ny banky voalaza eto. Izao
fiaraha-miombona antoka izao koa ny hanombohan’ny Cnaps ny
fanavaozana ny fanampiana ara-tsosialy (digitalisation).
L’article Fiaraha-miasa BNI-Cnaps : tsy ho vesatra ho an’ny fiarahamonina ny zokiolona a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 05/09/2020
Raha ny fanafihana tranombarotra sy kiôska mpandefa sy fakana vola amin’ny finday ary ny banky no lasibatra ireo andian-jiolahy mitam-basy teo aloha kely teo, izay dia ny olon-tsotra sy tokantrano heverin’ireo andian-jiolahy hahazoana vola indray no lasibatra. Tao Ankirihiry avaratra izao, dia tovolahy iray namonjy fodiana tokony ho tamin’ny 06ora sy sasany, ny andro rahateo mora maizana noho ny vanim-potoana ririnina, no notifirin’ireo jiolahy teo tsy nisaron-tava sy nitondra basy PA vita gasy. Lasa ny vola sy ny môtô aty ary ny findainy. Voa teo amin’ny kibony ity tovolahy ity, saingy tsy maty ary efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy teny amin’ny hopitaly be Analakininina Toamasina. Efa tsy maninona ny tenany saingy mbola eny amin’ny hopitaly be izy hatramin’izao mitsabo tena. Ny alin’ny alarobia ihany dia tokantrano iray tao Tsarakofafa no notafihan’andian-jiolahy nitondra basy PA vita gasy ihany koa. Tsy fantatra mazava ny isan’ireto jiolahy, satria teo ireo andiany niditra ny trano, tao koa ireo niandry tety ivelany. Niaro ny fananany sy fianakaviany ity raim-pianakaviana ity ka notifirin’ireo andian-jiolahy, teny amin’ny hopitaly vao fantatra fa bala telo no nahazoa azy nandritra izany. Tsy maty anefa ity raim-pianakaviana ity ary mbola manaraka ny fitsaboana azy eny amin’ny hopitaly be hatreto. Tsy mbola misy voasambotra kosa na iray aza na ilay nanafika tovolahy tao Ankirihiry avaratra, na ireto nanafika tokantrano iray tao Tsarakofafa ity. Ankoatra izay, ny fitarainan’ny olona izao dia ny tsy famalian’ireo polisy antsoina amin’ny finday raha misy ny antso vonjy taitra, nefa ireo polisy ihany no manaparitaka ireo findain’izy ireo amin’ny vahoaka, sy ny fahamarinan’ireo tranombarotra sy ireo magazay ary ireo mpanam-bola manana mpiambina mpitandro filaminana nefa ny vahoaka isam-pokontany mijaly amin’ny fanendahana sy sinto-mahery ary vaky trano tsy andro tsy alina. Malala DidierL’article Toamasina : Olona roa notifirin’ny jiolahy a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Kilalao iombonana: mbola tena ilaina ny ivokolo vahiny
« Tsy misy firenena na iray aza eto ambany masoandro ka afaka ny handroso amin’ny alalan’ny kolontsain’ny hafa », hoy ny mpampianatra sady mpikaroka iray izay. Hatreto anefa, mbola tsy laharampahamehana ho an’ny Malagasy ny hitia sy hiaina ny kolontsainy. Miainga any amin’ny sarambabembahoaka ka miafara any amin’ny mpitantana isan’ambaratonga, samy mametraka ny kolontsaina ho toy ny zava-bitika.Fanorona, katro, sns, no lalaovin’ny Malagasy any amin’ny ivokolo vahiny. Tranga mahamenatra. Sady tsy manana toerana ilalaovana azy ireny ny Malagasy no tsy manana finiavana mba hikarakara hetsika tahaka io « Kilalao iombonana » io rahateo. Efa ho 24 taona, ohatra, no nanatontosan’ny Alliance Française Andavamamba azy ity. Aiza ny mpandraharaha malagasy ? Aiza ireo Malagasy midradradradra fa tia an’i Madagasikara ? Aiza ireo sampandraharaha isan-tsokajiny tokony hanome lanja ny kolontsaina ? Sns.Hatreto, mbola tena sarotra ny ilaza fa tena mandray anjara amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny Malagasy, raha io tranga io no jerena !HaRy Razafindrakoto L’article Kilalao iombonana: mbola tena ilaina ny ivokolo vahiny a été récupéré chez Newsmada.
Akademia miaramila: miatrika fiofanana komando ny andiany faha-43
Manaraka fiofanana momba ny komando, ao amin’ny foibem-pirenena fanofanana komando, ao Ambatolaona Manjakandriana, nanomboka ny talata teo hatramin’ny 11 novambra ho avy izao, ireo mpianatra ho manamboninahitra, antsoina koa hoe “Elèves-officier-d’active” (EOA) avy amin’ny andiany faha-43, Akademia miaramila, Antsirabe. 70 ny isan’ireo mpiofana, ahitana vehivavy valo sy teratany kaomorianina miisa telo. Miara-miatrika izao fiofanana izao koa anefa ireo miaramila avy ao amin’ny “Bataillon des operations et services” (BAT OPS) ary ny “Premier regiment des forces d’intervention” (1°RFI). “Apinga”, izay ny iantsoana ity fiofanana ity.Anisan’ny tanjona amin’izao fiofanana izao ny fanamafisana ny vatana sy ny moraly rehefa sendra ny ady sarotra, izany hoe, ny hananan’izy ireo toe-tsain’ny mpiady… Nialoha ny tena nirosoana amin’izao fiofanana komando izao, nisy ny fizaham-pahasalamana sy ny fitsapana momba ny vatana tsy maintsy nataon’ny tsirairay. Rehefa vita ny fiofanana, mahazo mari-pahaizana sy “brevet Apinga” ireo mpiofana. Hiverina hanohy ny fiofanana any amin’ny Akademia miaramila any Antsirabe indray izy ireo avy eo. Amin’ny taona fahatelon’ny fiofanana, izany hoe, ny taona 2021, kosa, mbola hanaraka ny fiofanana ho “Fusiller marin commando (Fumaco), hatao ao amin’ny 2°RFI any Antsiranana, indray ireto mpiofana ireto.M.R.L’article Akademia miaramila: miatrika fiofanana komando ny andiany faha-43 a été récupéré chez Newsmada.
Telo volana faharoa 2019: mihatsara ny fitantanam-bolam-panjakana
Natao, omaly tetsy Anosy, ny fanombanana ny fitantanana ny volam-panjakana ho an’ny telo volana faharoan’ny taona 2019. Nojerena ny toe-draharaha toekarena sy ny fomba nandaniana sy nampidirana ny volam-panjakana. Fantatra fa tsara ny tondro ara-toekarena samihafa ny telo volana faharoan’ny taona 2019 raha oharina ny tamin’ny enim-bolana voalohany ny taona 2018. Anisan’ny nahatonga izany ny firoboroboan’ny sehatry ny asa vaventy, ny famokarana angovo ary mpizahatany.Nitombo ny vola niditra amin’ny fanjakana, tafakatra 1 469 miliara Ar, raha novinavinaina ho 1 455 miliara Ar (nanantombo 14 miliara Ar). Singanina amin’izany ny vola avy amin’ny haban-tseranana, nihoatra ny 102% (1 335 miliara Ar) raha 1 309 miliara Ar ny vinavina. Nahatonga izao vokatra tsara izao koa ny fanatsarana ny fitantanana ny hetra TVA sy ny fanaraha-maso hentitra ny fanangonana ny hetra ankapobeny.Manampy izany, nihatsara ny famoahana ny volam-panjakana, nahazoam-bokatra 22,44% ho an’ny tetibola ankapobeny, 15,40% ho an’ny tetibola fanampiny ary 30,85% ho an’ny kaonty manokan’ny Tahirimbolam-panjakana. Nahatratra 38% ny tahan’ny zava-bita sehatra efatra (fitantanan-draharaha, famokarana, fotodrafitrasa ary sosialy).Nilaza ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny vola (MEF), Raoelijaona Bien Aimé, fa tsy maintsy hamafisina ny fananana toe-tsaina mifototra amin’ny fahazoam-bokatra, ny mangarahara ary ny tamberin’andraikitra amin’ny vahoaka.Njaka A. L’article Telo volana faharoa 2019: mihatsara ny fitantanam-bolam-panjakana a été récupéré chez Newsmada.
HCDDED : Sortie du n° 8 du magazine « DEMOKRASIA »
Le magazine trimestriel « DEMOKRASIA », édité par le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit (HCDDED), en est aujourd’hui à sa huitième édition. Ce numéro se focalise sur les quatre grandes thématiques principales traitées par le HCDDED : la démocratie, l’Etat de droit, la bonne gouvernance et les droits de l’Homme. Notons que du 12 octobre au 3 novembre 2020, le HCDDED a organisé des séries d’ateliers portant sur ses domaines de compétences. Un projet appuyé par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Recueillis par Dominique R. L’article HCDDED : Sortie du n° 8 du magazine « DEMOKRASIA » est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article HCDDED : Sortie du n° 8 du magazine « DEMOKRASIA » a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Maty antoka tanteraka ny tantsaha: tafidina 100 000 Ar ny kilaon’ny lavanila
Ankoatra ny mosary any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy, olana goavana koa ny fitotongan’ny vidin’ny lavanila any Sava sy any Analanjirofo. Ahina hiteraka krizy sosialy sy toekarena koa izany satria midangana ny vidim-piainana any amin’ireo faritra ireo.Matiantoka tanteraka ny tantsaha any amin’ny faritra Sava sy Analanjirofo. Mitotongana ny vidin’ny lavanila, tsy nisy toy izany mihitsy tato anatin’ny 10 taona farany. Nitatitra izany fatiantoky ny tantsaha izany ny solombavambahoaka maromaro voafidy tany amin’iny faritra iny. Tafidina 100 000 Ar ny kilaon’ny lavanila masaka, tamin’ity herinandro ity, raha mbola 250 000 Ar tany aloha.Voalaza fa anisan’ny mahatonga izao olana lehibe izao ny havitsian’ny mpanangom-bokatra any an-toerana amin’izao fotoana izao. Manampy izany, nisy ny mpandraharaha lehibe sy efa niasa ela tany tsy nahazo fahazoan-dalana hanondrana any ivelany.Tsy tokony hoferana 250 dolaraEo koa ny vidin’ny lavanila avy aty Madagasikara lafo loatra eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ka tsy mividy ny mpanafatra. Takin’ny tantsaha koa ny tsy hamerana ny vidin’ny kilaon’ny lavanila ho 250 dolara (975 000 Ar), ivarotana azy any ivelany. Atsy Kaomoro, efa 150 dolara (585 000 Ar) ny vidin’ny lavanila amidy any ivelany.Ahina hiteraka krizy sosialy sy toekarena any Sava sy Analanjirofo ity fitotongan’ny vidin’ny lavanila ity satria tena lafo dia lafo ny fidangan’ny vidim-piainana. Maro ny ahina ho very fananana, satria nisy amin’izy ireo nindram-bola tany amin’ny banky.Njaka A.L’article Maty antoka tanteraka ny tantsaha: tafidina 100 000 Ar ny kilaon’ny lavanila a été récupéré chez Newsmada.
Zazalahikely iray nisy nanary tao anaty lavapiringa ao Andranonahoatra Antsirabe, afakomaly tolakandro. Ankizy nilalao no naheno ilay zazamena nitomany ka niantso fokonolona. Novakiana ny lavaka ka avotra soa aman-tsara ilay zaza.Hampitondraina anarana “Caserne” avokoa ireo zandary maty. Isan’izany ireo mahery fon’ny firenena lavo teo am-perinasa. Hotanterahina avy hatrany izany raha vantany vao ankatoavin’ny fianakaviany ny fangatahan’ny Zandarimariam-pirenena.L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
La préparation bat son plein pour les judokas malgaches. A moins d’un mois de la tenue du Championnat d’Afrique senior du 17 au 20 décembre au Palais des Sports de Mahamasina, le clan malgache s’active. Les présélectionnés au sein de l’équipe nationale malgache ont démarré les entraînements ce lundi, au Gymnase de l’Académie Nationale des Sports (ANS). Ce sont 40 judokas de la capitale, d’Antsirabe, de Toamasina et de Manakara qui poursuivent cette préparation en attendant l’arrivée des autres délégations de régions. Ils sont hébergés au M Hôtel à Ampefiloha. « Les judokas de Toliara n’arriveront qu’aujourd’hui. Nous avons appelé près de 40 judokas pour ce regroupement continu qui s’étalera jusqu’au début de la compétition. Nous nous entraînons à un rythme de 3 fois par jour en ce début des préparations », a souligné Jean Jacques Rakotomalala, directeur technique national. Lors de la première journée, les judokas ont été sous l’encadrement des coachs, Arsène Randriantovona, Martine Randriamalalaniaina et du préparateur physique, Mamy Randriamanasinoro. Ces championnats entrent dans le cadre des qualificatifs continentaux pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. La liste des judokas présélectionnés pour la ligue Analamanga. – 48 kg : Ranaivo Rotsy – 52 kg : Andriamifehy Mireille – 57 kg : Rakotovao Narindra – 63 kg : Rasoanaivo Razafy Laura – 70 kg : Ny Ando Jocyah – 78 kg : Rasoanaivo Miora – 60 kg : Rakotonandrasana Angelo, Moravily Sebany – 66 kg : Ramahefarison Rina, Rasoanaivo Razafy Lucas, Rambeloson Lita – 73 kg : Ravelojaona Rayan, Andrianasolo Lova – 81 kg : Ranaivoarisoa Fetra, Razakandrandria Roberto – 90 kg : Ramalajaona Ricky, Rakotovelo Mialy, Ramboaniaina Johary – 100 kg : Rasoanaivo Antsa +100 kg : Rajemisa Tojo Gaël, Rasoanaivo Razafy Tsanga T.H L’article Judo – Championnats d’Afrique : Les judokas malgaches en regroupement est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Judo – Championnats d’Afrique : Les judokas malgaches en regroupement a été récupéré chez Midi Madagasikara.
MCC – Cnemd: tanora 163 notolorana mari-pankasitrahana
Miezaka mitondra sy manome vitrika ho an’ireo manan-talenta amin’ny kolontsaina sy ny zavakanto ny minisitera misahana izany. Iray amin’ireny ny fanolorana mari-pankasitrahana.Ho fankaherezana amin’ny tontolon’ny zavakanto…. Notoloran’ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina mari-pankasitrahana ireo tanora 163, izay mpianatra avy ao amin’ny ivontoeram-panofanana momba ny dihy sy ny mozika Cnemd, omaly, tetsy amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy. Vokatry ny fandraisan’anjara tamin’ny seho ara-javakanto natao tamin’ny fanokanana ny Lapa Manjakamiadana sy ny Lapa Besakana, ny 6 novambra 2020 teo izany. Tonga nanome voninahitra sy nanolotra ny mari-pankasitrahana teny an-toerana ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, i Lalatiana Andriatongarivo. Nambarany tamin’izany fa vonona hatrany ny minisitera hanohana ireo tanora manan-talenta mba ho tena hanana ny maha izy azy. Nandritra ny lahateniny, nitondra ny fiarahabana sy ny fisaorana avy amin’ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina mivady ny tenany ho an’ireo tanora naneho zavakanto mahafinaritra. Marihina fa rafitra iray eo anivon’ny minisitera ny Cnemd. Vao tsy ela akory izay no vita ny fanamboarana ity ivontoerana ity raha simba tanteraka izany teo aloha. Efa manomboka maha velombolo, araka izany, ny ho avin’ny tanora sy ny zavakanto atsy ho atsy satria efa nahavita dingana sahady ny mpianatra na dia 50 ora aza no nanaovana ny fanomanana ny seho. Anisan’ireo tao amin’izany ivontoerana izany, tamin’ity taona 2020 ity, « Zaza kanto », raha ny nambaran’ny talen’ny Cnemd, i Holy Razafindrazaka.Narilala L’article MCC – Cnemd: tanora 163 notolorana mari-pankasitrahana a été récupéré chez Newsmada.